‘शारीरिक अभ्यास मोटोपन घटाउन मात्रै होइन’ – Nepali Gatha
३१ चैत्र २०७७, मंगलवार १७:०५ मा प्रकाशित
जबसम्म उनीहरूले शरीरमा अतिरिक्त क्यालोरीहरूको क्षतिपूर्ति हुनेगरी अधिक खाना खाँदैनन्, शारीरिक गतिविधिले कम्मर र शरीरको वरिपरि रहेको बोसो घटाउने गर्छ, जसले हाम्रो शरीरलाई मोटोपनाबाट कम गराउने गर्छ । तर के शारीरिक अभ्यास यही मोटोपना कम गराउनको लागि मात्रै हो त ? यसलाई फिटनेस सेन्टर सञ्चालन गरेर बसेका फिटनेस गुरुहरु भने स्वीकार्ने गर्दैनन् ।
विलासी जीवनशैलीका कारण पछिल्लो समय धेरैमा मोटोपनाको समस्या देखिने गरेको छ । मोटोपनासँगै यसमा धेरै दीर्घकालीन समस्या समेत देखिने गर्छ । त्यसैले मान्छे मोटोपनाको उपचारको लागि नियमित अभ्यासमा जाने गर्छन् र तौल घटेपछि आफैँ निस्कृय हुँदै जान्छन् । जिम जाने धेरै मान्छेमध्ये धेरैको ध्येय मोटोपन घटाउन र सिक्स प्याकको लागि मात्रै अभ्यासमा सक्रिय हुने मात्रै रहेको पाइन्छ । तर के शारीरिक अभ्यास मोटोपन घटाउन र सिक्स प्याकको लागि मात्रै हो त ?
न्युरोड र थापाथलीमा फिटनेस ग्यारेज सञ्चालन गर्दै आएका सुरेश सुवेदी फिटनेसको एउटा निश्चित समस्या समाधानको लागि मात्रै नभएर फरक फरक उद्देश्यको लागि शारीरिक अभ्यास उपयोगी हुने बताउँछन् । स्वच्छ शरीरबाट नै स्वच्छ मस्तिष्कको प्रयोग हुने भएकोले यो केवल शारीरिक तन्दुरुस्तीको लागि मात्रै उपयोगी भने नहुने दाबी गर्छन् । गर्भवतीले गर्ने शारीरिक अभ्यासले डेलिभरीको समय होस् या आमा र बच्चाको स्वास्थ्यलाई फाइदा गर्छ भने एक वृद्धावस्थाको व्यक्तिलाई शरीरमा हुने दुखाइ कम गर्न पनि यो प्रभावकारी देखिन्छ । फिटनेस शैली फरक भएपनि त्यसको लागि चिकित्सकसँगको परामर्श भने सबै उमेरसमूहका व्यक्तिको लागि अनिवार्य हुन्छ ।
सुवेदी १५/१६ वर्षदेखि ६८ वर्षसम्मका मान्छेहरु आफ्नो शारीरिक अभ्यास केन्द्रमा नियमित अभ्यासको लागि आउने भन्दै तीमध्ये अधिकांश मोटोपन कम गर्न नभएर नियमित शारीरिक एवं मानसिक तन्दुरुस्तीको लागि जिम जाने गरेका छन् ।